Ningnbo Yierka တံဆိပျကို Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
elastic ပင့်ကူ & စိတ်တိုင်းကျအပိုအပိုင်း
အို Ring ကို
encapsulation တွေကိုသေချာအို Ring ကို
NBR အို Ring ကို
Viton အို Ring ကို
X ကို Ring ကို
အို Ring2 အို Ring ကို
Hammer အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Kit ကိုချိုး
Ningbo Yierka တံဆိပျကို Co. , Ltd မှ, သုတေသနထုတ်လုပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် pneumatic ဖျံရောင်းဖို့ 1982 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Ningbo Yierka ရဲ့တံဆိပ်ခတ်ထုတ်ကုန်ခေတ်မီနည်းပညာနှင့်သာလွန်အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူထုတ်လုပ်ကြသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာတဲ့ဖောက်သည်အာရုံစိုက်ငါတို့တည်ထောင်ကတည်းကသစ်ကိုဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။
Yierka တံဆိပျတဲ့ professional မှိုသုတေသနအဖွဲ့နှင့်မှိုအပြောင်းအလဲနဲ့စင်တာရှိပြီးထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း, မှိုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပေါင်းစည်းမှုအတွက်၎င်း၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူလက်ရှိထက်ပိုမို 20000set မှိုရှိပါတယ်။ Yierka တံဆိပျမြားကိုလညျးမြောက်မြားစွာတံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းဖော်မြူလာရှိပြီးတင်သွင်းအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းများ အသုံးပြု. နှင့်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများကအောက်ပါအတူတူထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဖောက်သည်တိကျတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တံဆိပ်ခတ်ဖြေရှင်းချက်ပေး လိုက်. နိုင်ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ခေတ်စား Yierka တံဆိပျမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအရှေ့ဥရောပ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, တောင်အမေရိကန်, ဂျပန်နှင့်အရှေ့တောင်အာရှအတွင်းရောင်းချခဲ့သည်။ Yierka တံဆိပျကိုခိုင်မြဲစွာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်သမာဓိရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်အစှမျးသတ်တိထံမှတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ, ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကြီးထွားကူညီပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကော်ပိုရိတ်အတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
NO.68 Xinzhuang စက်မှုလက်မှုဇုန်, Gaoqiao မြို့, Haishu ဧရိယာ, Ningbo, တရုတ်
တရုတ် Hydraulic Pneumatic တံဆိပျစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ ...